ကျွန်ုပ်​ နှင့်​ ပဲနံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ကျွန်ုပ်​ နှင့်​ ပဲနံ
ကျွန်ုပ်​ နှင့်​ ပဲနံ
Posted by ムラカミ on Feb 14, 2015 in Critic, Drama, Essays.., History | 28 comments
တနိုင်​ငံလုံး ပဲပြုတ်​ နံပြား အလှူလုပ်​သဗျာ
မည်​သူမဆို စားနိုင်​ပါသည်​ ဘာညာဆိုင်းဘုတ်​​တွေနဲ့
​ကောင်းပါတယ်​ ဗိုလ်​ချုပ်​အမှတ်​တရ အ​နေနဲ့လုပ်​တာ
စိတ်​ရင်း ရည်​ရွယ်​ချက်​ကို​တော့ ​ပြောစရာမရှိပါဘူး
ဒါ​ပေမယ့်​ဗျာ ခိညားတို့ စဉ်းစားကျိ
ဗိုလ်​ချုပ်​ရဲ့ ထရိတ်​မာ့ခ်​ က ပဲနံဖြစ်​သင့်​လားဗျာ
ဒီဂျားထဲ ပဲပြုတ်​က ​ဆော်​ဒါပါလို့ ဘလားဘလား ဆိုတဲ့ ကျန်းမာ​ရေးသမား​တွေကတမျိုး
နံပြားက အင်​ဒိယအစာမို့ ဗိုလ်​ချုပ်​ကို ကီလားစာကြိုက်​တယ်​ ​ပြောသူ​တွေကတဖုံ
တကယ်​ဆို ဗိုလ်​ချုပ်​​မွေး​နေ့က က​လေးများ​နေ့ဗျ
ဖတ်​မိသ​လောက်​​တော့ အရင်​က က​လေး အားကစားပြိုင်​ပွဲ​တွေ ကျပန်းစကား​ပြော​တော လုပ်​ကြတယ်​
သည်​နှစ်​ ပြည်​​ထောင်​စု​နေ့မှာ အာ့​တွေလုပ်​သဗျာ
ဗိုလ်​ချုပ်​​မွေး​နေ့ကျ​တော့ ပဲနံ ​ပွဲ​တော်​ကြီး ကျင်းပကြတယ်​
ပဲနံဝိုက်​မယ့်​အစား ပိုက်​ပိုက်​စုပီး က​လေး​တွေကို ဗိုလ်​ချုပ်​ကို ​လေးစားအားကျအတုယူ​စေမယ့်​ အီဗန့်တခုခု လုပ်​သင့်​တယ်​ထင့်​
​နေရာတိုင်း​တော့မဟုတ်​ပါဘူး က​လေး​တွေပွဲလုပ်​​ပေးတဲ့​နေရာ​တွေလည်း ရှိပါရဲ့
ဒါ​ပေမယ့်​ တချို့ကျ​တော့ လမ်း​တွေပိတ်​ မန်းဒပ်​​ဆေကာက် ပဲနံ​ကျွေး ပြကဒိန်​​ရောင်း ထုံးစံအတိုင်း​လော်​နဲ့​အော်​
ဗိုလ်​ချုပ်​သာရှိလို့ မြင်​ရင်​ ​ဆေးရိုးလှမ်းတဲ့ ​စောက်​ကျင့်​​တွေ မပြင်​နိုင်​ကြ​သေးလို့ တန်​ရာတန်​ရာ အစိုးရ ရတာမလွဲိုလို့ ​ပြောမှာအမှန်​
သူ့သမီးမြင်​ရင်​လည်း ဒါဒီမို​ခွေစီ ​ဘောင်​လွတ်​တယ်​ ရှုံ့ချမှာ ​အေကန်​ပဲ
က​နေ့ ​ဆေးခန်းသွားတယ်​ အမျိုးဆရာဝန်​ထိုင်​တဲ့​နေရာ
သူ့မိန်းမ အ​မှတ်​မှား အ​ပြောမှားလိုက်​တာ တကယ်​ထိုင်​တဲ့် ​ဆေးခန်းကတခြားမို့ ​ရောက်​​အောင်​​မောင်းလိုက်​တာ မြို့တပါတ်​ပဲ
တလမ်းလုံး မြင်​လိုက်​ရတြဲ့ ကား​တေ်ွ ပိုစတာ​တွေ အလံ​တွေ
ကျန်း ဖြုန်းတီးလိုက်​တဲ့ အချိန်​​တွေ ​ငွေ​တွေ ဆီ​တွေ လုပ်​အား​တွေ အင်​နာဂျီ​တွေ
တကယ်​​လေးစားကြည်​ညိုရင်​ သူလို စိတ်​ထားနိုင်​​အောင်​ ကြိုးစား​ပေါ့
​နောင်​ ထမနဲပွဲ​တွေလို တရပ်​ကွက်​နဲ့တရပ်​ကွကိ ပဲနံပြိုင်​ပွဲ​တွေ ဘာ​တွေဖြစ်​လာရင်​ အင်း​မေ့ခ်ျ​အရ​သေဘီဆြာပဲ ပဲနံပွဲ​တော်​​နေ့ဖြစ်​လာပြီး ကမ္ဘာက ​အောင်​ဆန်း ဆိုတာကို ပဲနံနဲ့ပဲ ​ရောမှတ်​ကြလိမ့်​မယ်​
မသိရင်​ဘဲ ပဲနံတီထွင်​ခဲ့တဲ့ စားဖိုမှူးကြီးလိုလို
ဒညင်းသီးနဲ့ ဆူးပုပ်​ရွက်​ ရရင်​ စားချင်​တယ်​
အာမီရမ်​ နဲ့ ကန်​စွန်းရွက်​​ကြော်​ ဆိုရင်​ ပိုနားကားကိန်းမြင်​တယ်​
​နောက်​တာမဟုတ်​ပါဘူး ​တွေးမိတာကို ​ရေးတာပါ
ဆုံးသွားပြီဖြစ်​တဲ့ ဆရာမကြီးတ​ယောက်​နဲ့ပါတ်​သတ်​ပြီး သိခွင့်​သင်​ခွင့်​ရလိုက်​တဲ့ စကားတခွန်း ​ပြောပါရ​စေ
ငဒို့ လူမျိုးက ချစ်​တာ နဲ့ မုန်းတာ အ​ပေါ်လိုက်​ပြီး ​ပေးတဲ့အမှတ်​​တွေက အရမ်းခြားနားလွန်းတယ်​ဆိုတာ ပါပဲ
ဒီလို အမြု​တေပမာ တန်​ဖိုးရှိတဲ့လူကြီးရဲ့ တသက်​စာ ဖြတ်​သန်း ခဲ့တဲ့ထဲ မှတ်​သားနာယူ ကိုယ်​စားပြုစရာ ​မြောက်​များစွာထဲကမှ အနှီ ရိုမန်​တစ်​ဆန်​တဲ့ လက်​​ရေးမူမှာပါတဲ့ ပဲနံကို ​ဘောက်​မဲ့​ကြောင့်​ အသဲစွဲတယ်​မသိ
သိန်​ဂါရ ရသ ကို နှစ်​ခြိုက်​တဲ့ အသည်းမမာတဲ့ လူမျိုးစရိုက်​​ကြောင့်​ထင့်​
လမ်း​တွေပိတ်​​တော့ နဂိုကမှ ကားပိတ်​ ကားရှုပ်​ရတဲ့အထဲ ပိုဒုက္ခ​ရောက်​ကြရတယ်​
အဲ့နာရီ​တွေက သန်းချီတဲ့ လူဦး​ရေနဲ့ တွက်​ရင်​ လူတ​ယောက်​ချင်း ခိုးဝှက်​ခံရတဲ့နာရီေ​ပါင်းက သန်းဂဏန်းမ​လျော့ဘူး
အိမ်​က ကျန်​ကိုယ်​​တော်​က​တော့ ဂ​နေ့ ဗိုလ်​ချုပ်​​မွေး​နေ့ဆိုတာ​တော့သိတယ်​
ဂ​နေ့ အိမ်​လာ​ပေးတဲ့ ပဲနံနှစ်​ထ်ုပ်​ကို မစားဘူး
ပီးမှ ထမင်းမစားခင်​ဆာလို့ ဆိုပီးအုပ်​တယ်​​လေ
သား ဂ​နေ့ ဘာ​ကြောင့်​ ပဲနံ​ကျွေးလဲသိလား ဆို​တော့
သိတယ်​​လေ တဲ့ က​နေ့ ဗိုလ်​ချုပ်​​မွေး​နေ့​လေ တဲ့
သူ့အမှတ်​တရ အ​နေနဲ့ သူအရမ်းကြိုက်​တဲ့မုန့်​ကို ​ကျွေးတာ​လေတဲ့
ဒီအရွယ်​​လေးကို မိဂီ နားလည်​​အောင်​ ဘယ်​လိုရှင်းပြရမဲဗျာ
ဗိုလ်​ချုပ်​ခညာ က​လေး​တွေစိတ်​ထဲ ပဲနံပလုပ်​ပ​လောင်းဝါးရင်း ​တော်​လှန်​​ရေးလုပ်​ခဲ့သူကြီးကိုဖြစ်​လို့
ဗိုလ်​ချုပ်​နဲ့ ​မွေး​နေ့တူတဲ့ က​လေးများ​နေ့​မွေးသူ
ဂ​နေ့​တော့ ဟိုဒင်းနဲ့ဟိုဟာ စားပါမည်​
ဒီ နေ့ မိုးဇက်လေး မွေးနေ့လား။
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ မိုးZ ရေ။
မောင်ဂီ ပြောသလိုဘဲ တစ်ခါသား ရွာထဲမယ် စာရေးကောင်းတဲ့ ကလေးချစ်တတ်တဲ့ မိန်းကလေး ကို အရီး လဲ မကြာမကြာ သတိရပါတယ်။
ပဲ နံပြား သည် တွေ ဟန်ကျတာပေါ့။
ကျန်ကိုယ်တော်လေး ကတော့ တော်သကွယ်။ :))
ဒါကြောင့် ဟိုဘက်မှာ မောင်ကာကြီး ပြောနေတာကိုး။ ဘဲကင် နဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော် ဆိုတာ။
လော်ကိစ္စ နဲ့ လမ်းပိတ်ကိစ္စ ကတော့ တိုင်ပေါ့ကွယ်။
တိုင်တာကို ဂရုမစိုက်ရင် ဆိုင်းပေါက်ပေါက်ကိုင်ပြီး တစ်ကိုယ်တော်စန္ဒာပြ အေ။
သဒိရတာဂျင်းသာ တူမယ်​ဆိုရင်​ ​ကျေ်ာ့ဘက်​က ပိုပါဒယ်​​လေ
ဒါနဲ့ ဒီအချိန်ကြီးမှာ အလုပ်လုပ် နေတယ်ပေါ့လေ။
. တော်လိုက်တဲ့ ငါ့တူလေး။
မာ့ကက်တင်း စာအုပ်ကြီး ခေါင်းအုံးလုပ် အိပ်နေလား။ :))
မော်ဒယ်မမ လေး တွေ နဲ့ တော့ လဲ မပစ် လိုက်ပါနဲ့။
အထင်​ကြီးခံရ နည်းလားဆိုပီးနက်​ဖြန်​ အိမ်​မှာပုန်းအိပ်​​နေမယ့်​တူတူ ဂ​နေ့ည အိပ်​မရလို့ ​ရွှေရင်​ရှုပ်​ထိုင်​ကျိမိ​နေတာမဆန်း
Nihon Go No Fukufhuu
​ကျော်​က ​တောင်​ဆို ​မြောက်​​ရောက်​တတ်​တာ​လေ
ဗီလိန်​​တေ ဇာတ်​ရုပ်​မပီရင်​ မင်း​တား​တွေ ဘိုလုပ်​မဲ
တစ်ချို့ ဗီလိန် တွေ က ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
ရွှေလဲ တစ်ချိန် ကိုအံ့ကျော် လို ထန်းလျက်တောင်းကြီး ထမ်းပြီး နွားလှည်းကြီး နောက် ပြေးလိုက် ပေး ရင်
ထစ်ကနဲ ဆို အီမိုရှင်းများတတ်တဲ့ တို့ရွှေပြည်သူ/သား များ သနား သွားကြမဲ့ ဖြစ်ချင်း။
ဆူးလေမှာ ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်ပြီးသာ လမ်းလျှောက်ခိုင်းလိုက်ပါတော့ဗျာ..
သိပ်တော့လည်း အပြစ်မမြင်ကြပါနဲ့ …
“ ကြည် … ရနိုင်ရင် ပဲပြုတ် နဲ့ နံပြား စားချင်တယ် ” ဆိုတာ
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသံ ပါတဲ့ စကားသံ … “ ကြည် ”
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အမိန့်အာဏာသံ မပါတဲ့ အသံ “ ရနိုင်ရင် ”
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ရိုးရှင်းပွင့်လင်းပြီး တပ်မက်မှု ကင်းတဲ့
တောင်းဆိုမှု “ ပဲပြုတ်နဲ့ နံပြား ” တဲ့လေ …။
ဗော်ဒဂါ နဲ့ ကာဗီယာ ငါးဥ စားချင်တာ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ။
ဒီသဘောတွေကြောင့် သမိုင်းဝင် စကား ဖြစ်ခဲ့တာ ပါ ။။
ဒီတော့ အမှတ်တရ အနေနဲ့ ( အထူးသဖြင့် မျိုးဆက်သစ်တွေ
စိတ်ထဲစွဲ မှတ်မိသွားအောင် ပဲပြုတ်နဲ့ နံပြား ကျွေးကြတာပါ )
မှန်ပါတယ် ။ အိုဗာတင်း ၊ ဟော်လစ် ၊မိုင်လိုတွေနဲ့
မျိုးဆက်သစ်လေးတွေ ကျန်းမာသန်စွမ်း ဥာဏ်ပညာ
ထက်မြက်စေဖို့ ကျွေးမယ်ဆိုလည်း ကောင်းပါတယ် ။
ကျွေးပါ ။ ဒါပေမယ့် ပဲပြုတ်နဲ့ နံပြားကိုလည်း ပြားကြ
ပါစေ … ဗျာ ။ အပြစ်မမြင်ကြပါနဲ့ ခမျ ။ တနှစ်မှ တရက်ထဲပါ ။
နောက်တချက် ဟောပြောပွဲတွေ နဲ့ သမိုင်းထဲက ဗိုလ်ချုပ်
စကားတွေ ၊ အပြုအမူတွေကိုလည်း လက်ဆင့်ကမ်း မျှဝေ
နေကြတာပဲ မဟုတ်လား ။။။။
ကဲ … ဒီနေ့ ဘာအမှတ်တရပဲ လုပ်လုပ် အားလုံးကို
ချစ်တဲ့ မျက်လုံးနဲ့ ပဲ ကြည့်လိုက်ကြရအောင် ပါ …။
I totally agree with KZ.
“ခါတော်မီ စာအတိုအစ – ပဲပြုတ် နဲ့ နံပြား“
ကျွန်တော့်မှာ “ပန်းသီး“ အမြင်ကတ်တဲ့ ရောဂါရှိခဲ့ဖူးတယ်။
လူတွေက “ပန်းသီး“ မှ “ပန်းသီး“ သဲသဲလှုပ်ဖြစ်နေကြတာကို မြင်ရတော့ အလိုလို အမြင်ကတ်ရောဂါ ရလာခဲ့တာ။ “ပန်းသီး“ က ပစ္စည်းတစ်ခု ထုတ်တယ်ဆိုရင် .. ညအိပ်ပြီး တန်းစီဝယ်တာတို့၊ “ပန်းသီး“ က ထုတ်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို မကိုင်ရရင်ကို မနေနိုင်အောင် ဖြစ်နေတာတို့ကို မြင်ပြီး “မြင်ပြင်းကပ်“ တဲ့ ရောဂါ ရလာခဲ့ဖူးတယ်။
ဒါကိုပဲ ဂုဏ်တစ်ခုလို ယူဆပြီး “ဂုဏ်ယူ“ ခဲ့ယူတယ်။ အများက ရောရောယောင်ယောင် လုပ်တိုင်း ငါက လိုက်မလုပ်ဘူး။ အဲဒီ သဲသဲလှုပ်နေတာတွေကို အမြင်ကတ်လို့ပေါ့။ သူများတဲ့ ထူးခြားတဲ့ အမြင်ရှိသူပေါ့။ ဘဝင်ကလေးကလည်း မြင့်လို့။ မဝယ်နိုင်လို့ မကိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ သဲသဲလှုပ်ဖြစ်နေတာကို အမြင်ကတ်လို့ မကိုင်တာပေါ့။
အဲဒီလို ဖြစ်နေတဲ့ စိတ်ကို သတိမထားမိလေတော့ ဒါကို အမှန်အမှား မသုံးသပ်မိဘဲ ကိုယ့်ယူဆချက်နဲ့ကိုယ် “ငါကွ“ ဖြစ်နေမိတယ်။ သူများထက် ထူးခြားတဲ့ အမြင်ရှိသူ ဆိုပြီးတော့ .. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ကျေနပ်နေသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် သေချာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ … တကယ်လို့ သူ့ကုန်ပစ္စည်းဟာ အရည်အသွေးလည်း ကောင်းတယ်၊ ဈေးနှုန်းလည်း အဆင်ပြေတယ်။ အခြား ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ယှဉ်ရင်လည်း ပေးရတဲ့ ဈေးနဲ့ ထိုက်တန်တယ်။ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်နဲ့လည်း ကိုက်ညီတယ် ဆိုရင် .. သူများတွေ “သဲသဲလှုပ်“ ဖြစ်တိုင်း ကိုယ်က အမြင်ကတ်ပြီး “ပန်းသီး“ ဆို မသုံးဘူးလို့ဆိုပြီး ဘဝင်မြင့်နေတာ မှန်ရဲ့လားပေါ့။
အဲဒီမှာ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်စိတ်ကို ပြုပြင်ယူမိတယ်။ သူများတွေရဲ့ အပြုအမူ (ပြင်ပ ဖြစ်တည်နေမှု) ဟာ ကိုယ့်အတွက် ခံယူချက် (သက်ရောက်မှု) တစ်ခု ဖြစ်စေတာထက် .. ကိုယ့်ရဲ့ တိုင်းတာသင့်တဲ့ ပေတံတွေနဲ့ တိုင်းပြီး “ခံယူချက်“ တည်ဆောက်ဖို့ဟာ ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ ခံစားမိတယ်။ ဥပမာ … “ပန်းသီး“ ကုမ္ဗဏီဟာ မဟုတ်တာတွေ လုပ်တယ်။ အလုပ်သမားတွေကို ကျွန်တွေလို ဖိနှိပ် ခိုင်းစေပြီး ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်တယ်။ အလုပ်သမားတွေက မကျေမနပ်ဖြစ်တယ်။ သူတို့ ကုန်ပစ္စည်းဟာ သွေးစွန်းနေတဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ပစ္စည်းကို မသုံးဘူး ဆိုတာမျိုးသာ ဖြစ်သင့်တယ်။ သူများတွေ သဲသဲလှုပ်နေတိုင်း “အမြင်ကတ်ရောဂါ“ နဲ့ မသုံးဘူး ဆိုတာမျိုးဟာ … အများထက်ထူးခြင်လို့ .. နဖူးမှာ ဂျိုပေါက်တဲ့ အူကြောင်ကြောင် စိတ်ဓါတ်လို့ပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မြင်မိတယ်။
.. အော် … ပြောချင်တာက ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း နှစ် ၁၀၀ ပြည့်မှာ “ပဲပြုတ် နဲ့ နံပြား“ – “အမြင်ကတ်ရောဂါပိုး“ ပျံနှံ့လာနေမှုရဲ့ ဂျိုပေါက်နေတဲ့ စိတ်ထားအတွက် “စိတ်ရောဂါ“ ကာကွယ်ရေးအတွက် စဉ်းစားမိတဲ့ စာတိုလေးတစ်ပုဒ်ရယ်ပါ။
ဟိုဟာလေ စိုင်းစိုင်းအမြင်ကတ်ရောဂါကလည်း အဲ့လိုပဲ လို့ ငါကွ :loll:
ပန်းသီးသုံးပြီး ပန်းသီးဘာ​တွေမ​ကောင်းတာလည်း ဂဃနဏ သိသူကျ​တော့ စမတ်​ကျတယ်​ ​ခေါ်သဗျ
PS ပို့စ်လေးကတော့ တအားကောင်း။
ဒါနဲ့ဘယ်လိုလုပ် “ဂါးးး” ကပါလာသတုန်း……
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ … ပဲပြုတ် နဲ့ နံပြား
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ … ချောကလက် နဲ့ ဆမူစာ
ဘာစားမလဲ … ကြိုက်ရာကိုရွေး… ဟီ ဟိ
မောင်ဂီ ပြောသွားတာလေးကလည်း ထောက်ခံချင်စရာကောင်းလောက်အောင်
ခင်ဇော်ယီး ပြောသွားတာလေးကလည်း ကန့်ကွက်ချင်စရာ တစ်ကွက်မှ မရှိလောက်အောင်
မောင်ဂီ့ စကားကိုပဲ ယူသုံးလိုက်ပါတော့မယ်…။
တစ်နေ့ မုချ သေရမည်…။
မသေခင် လုပ်ချင်တာ လုပ်ကြ…။
လိုရင်းပြောရရင်တော့.. အောင်ဆန်းကိုချစ်ရင်.. အောင်ဆန်းထက်တော်တယ်လို့.. ကမ္ဘာကအသိအမှတ်ပြုတဲ့..
အတိဇာတသမီး အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတာလုပ်ကြ..။
ကျနော်လည်း ပိုစ့်ကို ထောက်ခံတယ်..
ကိုဂီ့  အစိုကို သဘူတောတယ်.. ။
သူကြီး က သခင်အောင်ဆန်း လက်ရေးစာမူလေး ပြလို့ သတိရသွားတာတစ်ခုက…
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ထဲက ဗိုလ်ချုပ်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်သူက …အောင်ဆန်းဆိုတဲ့ လက်မှတ်ထိုးတဲ့ အခန်း…
အင်္ဂလိပ်လို Aung San လို့…စာမှာ လက်မှတ်ထိုးလိုက်တာနော…
တကယ့် သခင်အောင်ဆန်းက တော့ ဗမာလိုပဲ..သူ့နာမည်ကို ရေးမယ်ထင်ရဲ့…
ဇာတ်​လမ်းမှာ ​ဗမာလိုဖတ်​ပြ​ပေမယ့်​ ​ရေး​တော့ ဘိုလို​ရေးမှာ​လေဗျာ
ဆို​တော့ ဆိုင်းကို ဘိုလိုထိုးတယ်​လို့ ယူဆနိုင်​ပါတယ်​
အောင်ဆန်း အက်တလီ စာချုပ် မှာ Sign Initial က AS ဖြစ်ပြီး ဘိုလို ဆိုင်းထိုးထားပါတယ်။
သက်သေ ပုံ အဖြစ် သူကြီး မင်း ဆီပို့ လိုက်ပါ့မယ်။
သူကြီး ဖြည့်ပေးပါရှင့်။ :))
သခင်အောင်ဆန်းစကားထဲ.. ကျုပ်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကိုမမုန်းပါဘူး.. ဆိုတဲ့.. စကားရှိဖူးတယ်မှတ်မိတယ်..။
ပို့ပြီး။ ကျေးဇူး။ :))
သူကြီးမင်း စ ပြောတော့ ဒီ အရူးမ ကလဲ ကွေးနေအောင် ကချင်တာ နဲ့ စာအုပ် ပြန်ရှာဖတ် နေပါတယ်။
အခုဟာ ကို လဲ ဖတ်ရင်း သဘောကျ လွန်းလို့ တစ်ချို့ စာပိုဒ် တွေ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဒီ ကျောင်းသား လေး တွေ ကို ဖတ်စေချင်လိုက်တာ။
(၁၉၄၇ဖေဖဝါရီ ၄ရက် ည ၇နာရီ ခွဲ အသံလွှင့်ရုံမှ တိုင်းပြည်သို့ ပြောကြား သော ဘိလပ်ပြန် မိန့်ခွန်း)
အခု တိုင်းပြည် ကို အတိအလင်း ကျုပ်ပြောချင်တယ်။
လွတ်လပ်ရေး ကို အေးအေးချမ်းချမ်း ရနိုင်မဲ့နည်းလမ်း ကျုပ်တို့ရပြီလို့ ကျုပ်ထင်တယ်။
အေးအေးချမ်းချမ်း ရနိုင်ရက်နဲ့ ဆူဆူပူပူ လုပ်ချင်တယ် ဆိုတဲ့ လူဟာ အရူးတွေဘဲ။
ကျုပ်ပြောတာမှန်မမှန် တစ်နှစ်သာ စောင့်ကြည့်ပါ။
ဗမာပြည် ကို လူမလေး ခွေးမခန့် ဖြစ်နေတဲ့ နေရာက တကမ္ဘာလုံးက ဗမာပြည် အရေး ကို ဂရုစိုက်လာရအောင် ကျုပ်ဘဲ ဆွဲတင်ခဲ့ရတယ်။
အခု ကျုပ်အစိုးရအဖွဲ့ထဲ ဝင်လာတဲ့ နေ့ကစပြီး တိုင်းပြည်သိ ကျုပ်တို့ တိုင်းပြည်အတွက်လုပ်နေတာတွေ ကို ခင်ဗျားတို့ အမြင်ဘဲ မဟုတ်လား။
အခုလဲဘဲ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် ကိုရအောင် လုပ်ခဲ့တယ်။
တောင်တန်းများကို ကျုပ်တို့လို တန်းတူ အခွင့်အရေးပေးမယ် ဆိုတဲ့ မူလဲ ရခဲ့တယ်။
တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက် အသက်စွန့်စရာရှိခဲ့အခါ ကျုပ်စွန့်ခဲ့တယ် မဟုတ်လား။
ရှေ့ ကိုလဲ စွန့်စရာ ပေါ်သေးရင် ကျုပ် စွန့်ပြီး လုပ်ရန် အသင့်ပါဘဲ။
ဒါပေမဲ့ ကျုပ်ဟာ တိုင်းပြည်ကို အရမ်းမဲ့ ဗြောင်းဆန်အောင် ကျုပ်မလုပ်လိုဘူး။
ကျုပ်ဟာ နိုင်ငံရေးစတန့်မင်းသား မဟုတ်ဘူး။
ကျုပ် ရဲရဲကြီး အာမခံတယ်။
ကျုပ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု ကို ယုံယုံကြည်ကြည် နဲ့ လိုက်ကြပါ။
တစ်နှစ်အတွင်း မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး ရစေမယ်။
ရတဲ့နေရာမှာလဲ အရမ်းမဲ့ အင်အားမကုန်ဘဲ အေးအေးဆေးဆေး ဖြစ်နိုင်သမျှ ဖြစ်စေရမယ်။
ကျုပ်ဟာကျုပ် ဂတိ ကို မဖျက်ခဲ့ဘူး ဆိုတာ ခင်ဗျား တို့ သိတယ်မဟုတ်လား။
ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ မှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျုပ်ခေါင်းဆောင် တဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့မှာ ဖြစ်ဖြစ် ငွေရေး ကြေးရေး နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး တပြားတချပ် လိမ်ကောက်တာ ကို ကျုပ်သိရင် သည်းမခံနိုင်ဘူး။
အဲဒါမျိုးကို ခင်ဗျားတို့ သိရင် ကျုပ်ကို ကျကျနန လာပြောပါ။
ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့ လူ ဖြစ်ဖြစ် ကျုပ် အရေးယူမယ် ဆိုတာ အတိအလင်း ကျုပ်ပြောလိုတယ်။
နောက်ဆုံး ကျုပ်ပြောလိုတာက ကျုပ်ဟာ ဗမာပြည် လွတ်လပ်တဲ့အခါ အင်္ဂလိပ် နဲ့ မိတ်ဆွေအရင်းအချာ သဘောဖြစ်စေချင်တယ်။
အကြောင်းကြောင်း တွေ ကို ပြောရမယ် ဆိုရင် ရှည်လျား နေမယ်။
နိုင်ငံချင်းပေါင်းရတယ် ဆိုတာ အားသိပ်မကြီးတဲ့ နိုင်ငံနဲ့ ပေါင်းရင် အနိုင်ကျင့်ခံစရာမရှိဘူး။
တဦးကိုတဦးလဲ အား ဖြည့် နိုင်တယ်။
အားသိပ်ကြီး တဲ့ နိုင်ငံ နဲ့ ပေါင်းရ မယ် ဆိုရင် အနိုင်အကျင့်ခံ ရသလောက်ခံရမှာဘဲ။
ဒါကြောင့် ကျုပ်တော့ ခင်ဗျားတို့ ပြောချင်တာပြော။
လွတ်လပ်တဲ့ ဗမာပြည်ဟာ အင်္ဂလိပ် နဲ့ ပေါင်းသင့်တယ်လို့ ကျုပ် အခု ကထဲ က အတိအလင်း ပြောထားချင်တယ်။
တစ်အုပ်လုံး ကို ဖြေးဖြေးချင်း ရိုက်တင် ရ မလားလို့။
စကားလုံး တိုင်း က တစ်အား ပါဝါကြီး တာ။
သူကြီး ပြောတဲ့ စကားလုံး တစ်နေရာတော့ တွေ့ မယ် မှန်းတယ်။
ပြီးရင် ဘုန်းကြီး များ ကို ဟောတဲ့ တရား တင်ဦးမယ်။
သူကြီး ဒီ စာအုပ်ထဲ မယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ တဲ့၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တဲ့။
သူလဲ ဂလို ဘဲ ခေါ်ခဲ့တာကို။
သများ တို့ ကျ မှ ထွင်ခေါ်တာ ဝုတ်ဘူး။
အခုခေတ်မှာတော့.. အကြီးအကဲစကားပြောရင်..မိန့်ခွန်းရေးရတဲ့ ပရိုဆိုတာသတ်သတ်ရှိတယ်..။
တကယ်ကတော့.. အလောင်းဘုရားလက်ထက်လောက်ကတည်းက.. အမေရိကံပြည်ထောင်စုလို့..ပေလွှာထဲရေးတာတွေ့ဖူးတယ်..။
ကကြီးကညစ်နဲ့ခြစ်ရေးနေတုံး.. အပေါ်က..အချွန်တခုခုများကလေးဆော့လို့ပြုတ်ကျပြီး.. အစက်တစက်ပိုသွားသလားမသိ..
သူ့ကို ချစ်ရင် သူဖြစ်စေချင်တာတွေ ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးကြရမှာ။
သူ့ကို လေးစားရင် သူလျှောက်ခဲ့တဲ့ လမ်း ဖြောင့်အောင် ဆက်လှမ်းကြရမှာ။
သူစားတာတွေ လိုက်စားတဲ့ နေရာမှာ ရပ်မနေသင့်ဘူး။
ကမှော်တို့ မြန်အောင်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ဓာတ်ပုံတွေ ကာလာသွင်းပြီး ပုံပေါင်း ၁၀၀ ပြပွဲ လုပ်တယ်။ကလေးတွေကို ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်း ပြောပြကြတယ်။
Moe Z ကလေးကို အန်တီလည်း သတိရနေတာ။လက်က မရောက်ဖြစ်လိုက်လို့။
သူက ဘူနဲ့မှ ရန်​မဖြစ်​တတ်​၀ူး
သာမီးကဒေါ့ ပဲပြုတ်နဲ့ နံပြား ကြိုက်တော့ အဆင်ပြေတယ်…အူးလေးလည်း နံပြားကြိုက်တယ်မား…အာဟိ